Google | My Burmese Blog
Posts Tagged: Google	Google Ventures
On May 12, 2012	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Web	Google Ventures
ဒီနေ့ မကျြစိလညျ လမျးမှားပွီး Google Ventures ဆိုတဲ့ ဆိုဒျတဈခုရောကျသှားတယျ.. ထူးဆနျးတာက Google Ventures က ကိုယျပိုငျ domain နဲ့ အရငျလို Google sub domain မဟုတျဘူး။ ဝငျကွညျ့လိုကျတော့လညျး ဆိုဒျက ဒီဇိုငျးမိုကျတယျ။ ဒါနဲ့ ဘာလဲဖတျကွညျ့တော့ supporting ပေးဖို့အတှကျ ရညျရှယျထားတာတှရေ့တယျ။ နောကျ back up လုပျပေးထားတဲ့ company တှလေဲ ဝငျကွညျ့ဖွဈတာပေါ့။ Google Ventures ကနေ start up companies တှအေတှကျ ငှရေေးကွေးရေးကို ထောကျပံ့ပေးတာတှရေ့တယျ၊ နောကျ ရငျးနှီးမွှုပျနှံတယျလို့လဲ သုံးထားတော့ လုပျငနျးတညျထောငျဖို့ ငှလှေညျ့ပေးထားတဲ့ သဘောမြိုးဖွဈမယျထငျတယျ။ App, Google	Continue Reading
Google+ And Swiffy
Gmail’s New Features, Tips & Tricks
On August 16, 2010	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Tech News, tips and tricks	Gmail ရဲ့ layout အသစ် features အသစ်ကိုဒီနေ့မှ သေချာ စမ်းသုံးကြည့်မိပါတယ်။ သတိထားမိပေမယ့် မအားတာကြောင့် မကြည့်ဖြစ်တာလဲပါပါတယ်။ အခုကတော့ Multiple Accounts ကော Google Contact ကော အခြား ကောင်တွေပါစမ်းကြည့်ဖြစ်တယ်။ Google ရဲ့ Multiple Accounts feature က တော်တော်အသုံးဝင်ပါတယ် အရင်ကဆို အကောင့်တစ်ခုဝင်ထားရင် cookie ကြောင့် နောက် အကောင့်တစ်ခု ၀င်ချင်ရင် တစ်ခုထွက်ပေးရပါတယ်။ Firefox မှာဆိုရင် plug in သုံးပြီးဝင်ရပါတယ်။ အခုတော့ officially မလိုတော့ပါဘူး။ Google, Mail	Continue Reading
Air Plane Graveyard
On March 7, 2010	by Htoo Tay Zar	With	2 Comments	- Intresting News	လူတွေအတွက် သင်းချိုင်းရှိသလို လေယာဉ်ပျံတွေ အတွက်လဲ သင်းချိုင်းရှိတာကို ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကတွေ့လိုက်မိတယ်။ Arizona, USA မှာ ရှိပါတယ်။ အပေါ်က ပုံမှာ ပြထားသလိုပဲ လေယာဉ်တွေ တန်းစီနေတာပါ။ အကြီးကြီးတွေကနေ ပေါက်စလေးတွေထိရှိပါတယ်။ ရဟတ်ယာဉ်တွေလဲ ရှိပါတယ်။ ရာချီပြီး ရှိတာမို့ အပြင်မှာ နေရာအရမ်းကျယ်လိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရတယ်။ များလိုက်တဲ့ လေယာဉ်တွေများ အရုပ်တွေကျနေတာပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူး Counter Strike ထဲကလိုပဲ သေနတ်ပစ်တိုင်း သွားကစားချင်တယ်။ အောက်မှာ ပုံတွေ အသေးစိတ်ကြည့်လို့ ရပြီး E Irvington Rd, Tucson, Pima, Arizona, USA ကို Google Map မှာ ကြည့်လိုက်ရုံပါပဲ။ Google Map embed လုပ်ထားတာမို့ RSS က ဖတ်ရင်တော့ မြင်ရမယ် မထင်ပါဘူး ခင်ဗျာ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
funny, Google	Continue Reading
Change Your Gtalk Avatar Automatically
On March 5, 2009	by Htoo Tay Zar	With	3 Comments	- Download, Tools	ဒီနေ့ ကိုနေယံဦး က မေးလို့ အရင်တွေ့ဖူးတဲ့ Gtalk Add on Shell ကို ပြန်ရှာရင်းနဲ့ ပို့စ်တင်လိုက်ပါတယ်။ ဒီ add on နဲ့ ကိုယ့် Gtalk က avatar ကို လုိုချင်တဲ့ အချိန်ပိုင်း အတွင်းမှာ သူ့ အလိုလို ပုံတွေ ပြောင်းအောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တော့ စမ်းမသုံးကြည့်ဖူးဘူး။
Download, Google	Continue Reading
Detecting Google’s Chrome
On September 9, 2008	by Htoo Tay Zar	With	1 Comments	- Download, Web	မနေ့ညက လုပ်စရာရှိတဲ့ ဘန်နာဆွဲတဲ့ အလုပ်ရယ်၊ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် အတွက် CD layout ရယ် ဆွဲပြီး မအိပ်ချင်သေးတာနဲ့ Google’s Chrome ကို စမ်းကြည့် ဖြစ်ပါတယ်။ 20 things about Google’s Chrome ပို့စ်မှာ ကျွန်တော် ပြောခဲ့ သလိုပဲ Chrome က WebKit ကို သုံးတဲ့ အတွက် layout design တွေမှာ IE အတွက်လို သီးသန့် လိုက်ပြင်စရာမျိုးတွေ မရှိပါဘူး။ သုံးရတာလဲ မြန်တယ် အဆင်လဲပြေပါတယ်။
20 Things About Google Chrome
On September 3, 2008	by Htoo Tay Zar	With	4 Comments	- Tech News	ဒီနေ့ သတင်းဆိုဒ်တွေ feed တွေ တော်တော်များများမှာ Chrome, Chrome ဆိုတာပဲ တွေ့နေရတယ်။ ဒါနဲ့ Chrome အကြောင်းကို လိုက်ရှာ ဖတ်ဖြစ်တဲ့ အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာတွေ ပြန်ရှဲလိုက်ပါတယ်။ Google ရဲ့ Chrome browser ကို အခု download လုပ်လို့ ရနေပါပြီ.. လိုဂိုက ကြည့်ရတာ Spider Man ကားထဲက Goblin ရဲ့ ဗုံးတွေနဲ့ တူတယ်ဗျ။ Google Chrome က open source ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်ထင်တာ သူတို့ Firefox, Flock တို့လိုပဲ Gecko Engine သုံးလိမ့်မယ် ထင်ထားတာ အခုဖတ်ကြည့်တော့မှ သူတို့ သုံးတာ Apple’s Safari, Google Android တို့သုံးတဲ့ WebKit ဆိုတာ သုံးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် အထင် Chrome မှာ PNG transparent, opacity, alignment, rounded corner တွေလဲ Safari မှာ လိုရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ Google Chrome အကြောင်းမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ Google Chrome Cartoon စာအုပ်ကို ဖတ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ Google Chrome ကို အခုလောလောဆယ် Windows အတွက်ပဲ ရပါသေးတယ် Linux, Mac အတွက်တော့ မကြာခင် ရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ 1. Google Chrome is built using WebKit, which also powers Apple’s Safari and Google’s Android.
On July 26, 2008	by Htoo Tay Zar	With	3 Comments	- News, Web	ဒီနေ့ မြန်မာ wikipedia မှာ စာရေးဖို့ လုပ်ဖြစ်ရင်း wiki အကြောင်းတွေ လိုက်ဖတ်ဖြစ်တယ်။ Google မှာလည်း ကိုယ်ပိုင် encyclopedia ရှိနေခဲ့တာ reader ဖတ်မှပဲသိရတော့တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ 24 ရက် July ကမှ စတာ Knol ~ A Unit Of Knowledge (Beta) တဲ့. Wikipedia လိုပဲ ကိုယ်သိတာရှိရင် ၀င်ရေးပြင်ရေး နိုင်တယ်။ Wiki နဲ့ လုံးဝခြားနားတဲ့ အချက်က Wiki က GNU License နဲ့ ပါ Knol ကတော့ ကြိုက်ရာ Creative Commons licenses တွေထဲက တစ်ခုကို သုံးနိုင်တယ်။ နောက်သူက blog တွေလို အောက်ဘက်မှာ comments ရေးလို့ရတယ်။ နောက်ကိုယ့် GoogleAds Publisher ID နဲ့ ဆိုဒ်ဘားမှာ adsense ထည့်ပြီး ပိုက်ဆံရှာလို့ရတယ်။ ကံဆိုးစွာပဲ အဲဒီမှာ ရေးမယ်ဆိုရင် Google ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ဒါမှမဟုတ် Credit Card နဲ့ Verify လုပ်ပေးရတယ်။ မြန်မာကဆို ရေးဖို့မလွယ်ဘူး တကယ်တော့ ကျွန်တော်လည်း ရေးဖို့ မစဉ်းစားပါဘူး eng လိုမှမရေးတတ်တာ မြန်မာလိုရေးတာတောင် အခုထိဘယ်လိုရေးရလဲ မသိသေးဘူး။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ကွန်ပျူတာ ဝေါဟာရတွေ (နောက်အခြား စကားလုံးတွေ) ကြည့်ချင်ရင် wiki လို နောက်ထပ် ကြည့်စရာတစ်နေရာတိုးလာတာပေါ့ဗျာ။
Google, tech news, wiki	Continue Reading